10ka Talooyin ee Ugu Haboon ee Lagu Kordhiyo Mushahar Wanaagsan | Martech Zone
10ka Talo ee ugu sareeya ee lagu helo kor u qaadista mushaharka kafiican
Talaado, Nofeembar 14, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Haddii aadan horey u ogaan, waxaan leeyahay degel kale oo la yiraahdo Xisaabiyaha Lacagta. Waxaan rajeynayaa inaad u aragto inay waxtar leedahay. Maareeye ahaan, waxaan u baahnaan jiray inaan xisaabiyo mushahar kordhinta shaqaalahayga markasta - bartaas ayaa ka soo baxday baahida loo qabo in si fudud loo xisaabiyo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo daro talooyin ku saabsan sida loo helo mushahar kordhin. Waxaan u maleynayaa in magdhowgu uu yahay qayb lama huraan u ah shaqo kasta - runtiina waa asalka ictiraafka oo dhan. Helitaanka "mahadsanid" ama "shaqo weyn" waa wax aad u fiican - laakiin had iyo jeer lacag kuma rido jeebkaaga.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka helay wada hadalka mushaharka mid aad u fudud sida shaqaale iyo maamule labadaba - marka waa kuwan 5-ta talo ee ku saabsan helitaanka mushahar kordhin wanaagsan.
Haddii aad u malaynayso inaad u qalanto, ha aqbalin mushahar kordhinta laguu fidinayo. Maareeyayaashu inta badan waxay ikhtiyaar ku leeyihiin miisaaniyaddooda waxayna badanaaba siin karaan koror ka wanaagsan kan dhab ahaan loo bixiyo.
Dib-u-eegistaada, hubi inaad la hadasho qiimaha aad u keentay shirkadda, ee aanad u bixin kharashka mushaharka. Waa muhiim in loo shaqeeyayaashu ay kuu arkaan maalgashi. Haddii aad tahay maalgashi wanaagsan, waxba kama dhimayaan inay iibsadaan wax badan oo saamigaaga ah.
Iska ilaali inaad naftaada barbar dhigto shaqaalaha kale. Caafimaad ma ahan inaad isbarbar dhigto shaqaale kale oo laga yaabo inuu sameeyo ama uusan sameyn karin lacag kaa badan. Maareeyayaasha badiyaa tan ayaa la diida - oo ay weheliso qiimeyn waxqabad, kordhinta mushaharku waa qayb aad u walaac badan oo ka mid ah shaqadooda. Isbarbardhiga naftaada iyo kuwa kaleba waxay kaa fogeyn kartaa wax ka badan inta aad ku caawin karto. Sidoo kale, inaad isbarbar dhigto shaqaale kale 'kooxo' adiga iyo shaqaalaha kale. Waa muhiim inaad magac u hesho naftaada.
Ogow waxa sicirka nolosha ku kordhay gobolkaaga. Haddii laguugu deeqo 3% koror gobol leh 4% qaali nolosha ah… malee ?! Waxaad heshay mushaar dhimis!
Heshiis ka hel qiime kasta / kordhin koror oo ku saabsan waxa mushaharkaagu u eg yahay iyo sidoo kale waxa ay tahay inaad ku guuleysato si aad u hesho koror wanaagsan. Haddii maamulahaagu ku siiyo 5 hadaf si aad u hesho 5% oo korodh ah… markaa hubi inaad fuliso yoolalkaas oo aad xusuusiso isaga / iyada guushaada - xitaa ka hor dib-u-eegistaada soo socota.
Ha ka baqin inaad weydiisato kordhinta mushaharka wixii ka baxsan meertadaada caadiga ah. Haddii aad ka tagtay sharaabaadyada maareeyahaaga ama shirkaddaada, ka faa'iideyso waqtigaas inaad weydiiso inay muujiyaan qaddarintaada iyada oo loo marayo kordhinta mushaharka. Haddii gabi ahaanba aan la oggolaan, weydiiso gunno.
Ogow waxa cabirka mushaharkaagu u yahay gobolkaaga iyo shaqadaada. Waxaa jira boggag badan oo leh macluumaadkan, mid bilaash ah ayaa ah Indeed.com.
Haddii aad ku jirto khilaaf mushahar aad u adag, ka codso sahan mushahar waaxdaada Shaqaalaha ama xitaa naftaada maal gasho. Salary.com waxay bixisaa sahan mushahar dhameystiran halkan.
Xoogga saar shaqadaada hadafyada saamaynaya gunta. Iibin dheeri ah, sii haynta macaamiisha oo wanaagsan, adeegyo qiimo leh, hagaajinta hababka, goynta miisaaniyadaha… waa wax aad u fudud oo aad codsan karto kordhinta mushaharka marka aad siineyso doolar adag iyo senti wixii aad ku dartay khadka hoose.
Nasiib darrose, waxaan ku noolnahay maalin iyo da 'ay shaqooyinku ku badan yihiin shaqaale tayo leh, tayo leh. Mushahar kordhinta ugu badan ee aad isleedahay waad ku guuleysan doontaa waa tan aad hesho markii aad ka tagto shaqo-bixiyahaada oo aad shaqo kale hesho. Nasiib darro, laakiin waa run! Had iyo jeer waxaa jira tallaalka dheer ee aad ka heli karto dalab fiican oo ka hor intaadan bixin laakiin waa inaad isweydiisaa naftaada sababta ay u go'aansan doonaan inay ku siiyaan intaanad tegin halkii ay markii hore ku siin lahaayeen, in kastoo. Ma ahan inay qaadato hanjabaadda bixitaanka si aad u hesho magdhowga aad u qalanto.
Miyaad lashaqeysaa Hay'adaha Samafalka ah?